युटयूब र फेसबुकले आधिकारिक मिडियाको बदनाम «
प्रकाशित मिति : 12 August, 2019 2:21 pm
खास भन्ने हो भने पहिलो कुरा, फेसबुक र युटयूबलाई आधिकारिक रुपमा मिडिया नै भन्न मिल्दैन । दोस्रो कुरा यी दुवै माध्यम प्रयोग कर्तालाई पत्रकार भन्न पनि मिल्दैन । त्यो त एउटा सामाजिक सञ्जाल मात्र हो भने यो सञ्जालको प्रयोग गर्नेलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता मात्र भन्न मिल्छ । वास्तविक मिडिया भनेको त्यो हो कि जुन नेपाल सरकारको सूचिमा सूचिकृत अर्थात सञ्चार मन्त्रालयबाट अधिकार लिएको हुनुपर्छ र पत्रकारिता जगतको आचार संहिता बुझेको हुनुपर्छ ।
आधिकारिक मिडिया हाउसले चाँही सरकारलाई कर तिर्नु पर्ने रे अनि यो बिना फोकटकोे झोले सञ्जालाई चाहिँ छुट दिनृु पर्ने ? तत्काल यसको पनि नियम बनाऊ सरकार !
येले दोङ (सम्बत्) का लागि सबै किरातीहरुसँग सहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ
–निनाम कुलुङ ‘मंगले’ सन् २०२० जनवरी १४ मा ‘सार्वजनिक अनलाइन’मा प्रकाशित ‘किरात येले सम्बत्ः व्यवहारिक